Tsika Robhoti Welding Service Service & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Yedu Welding Workshop inopa simbi mamiriro ekugadzira uye chaiyo pepa simbi nhema. Zvigadziriso zvine 160, kusanganisira mamwe ma welders epamusoro ane TUV EN287 / ASME IX chitupa, anodarika makumi masere ePanasonic MAG michina uye gumi nemashanu TIG michina. 20 marobhoti ekutengesa kubva kuKuka nePanasonic. ISO 3834 yakasimbiswa muna 2018.
Mugoveri weakarurama sheet simbi yekunyepedzera masevhisi kubvira 2002, Hengli Metal Kugadziridza inopa vatengi mutengo unoshanda wekugadzira mhinduro nekubatanidza kushandisa kwedu tekinoroji yepamusoro neanopfuura makore gumi nemasere ezvakaitika zvechiitiko kuburitsa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pa-nguva uye kujekesa.
Yedu jira simbi yekugadzira masevhisi anosanganisira Laser Kucheka, CNC Kubaya, Kuumba, Kutenderera, Welding, Kupedzisa, uye zvakasiyana siyana Mashini Shop Services. Kugona kwedu kunosanganisira kugona kugadzira zvikamu kubva pasimbi isina chinhu, aruminiyamu, simbi, ndarira, mhangura uye simbi dzakakurudzira.
Hengli Metal Processing ine Chiitiko uye chinja kushanda neVatengi kubva kumakambani mazhinji emunyika kune varidzi vakazvimiririra vari kutsvaga kuratidzira chikamu. Isu tinotora kudada kukuru kwete chete mukuzvipira kwedu kune mhando, asi zvakare yedu track rekodhi yekupa inoshanda uye yakavimbika ekugadzira masevhisi kune vatengi vedu.
Yedu yekusimbisa pahunhu ndeyechipiri kune chero ine zvigadzirwa zvakagadzirwa neyakaumbwa mushe uye yemhando yepamusoro. Yedu yakazara renji sevhisi inosanganisira MIG, TIG uye kuona nzvimbo. Isu tiri ISO 3834 yakasimbiswa uye ISO 9001 yakanyoreswa kambani ine yakasimbiswa welders uye maneja vashandi. Iyo ISO 3834 maitiro uye zvitupa zvinopa yakawedzera nhanho yekuvimba uye kuvimbisa kune vatengi vedu kuti zvinyorwa, weld mhando uye ruzivo ruzivo rwevatengesi vedu vanozvimiririra zvakasununguka zvinopesana nezvinodiwa zvematanho, uye nekudaro inoderedza njodzi yemhosva. Isu tinoona kuti basa redu rinotungamirwa nemhando yepamusoro yepamusoro uye chengetedzo inogoneka.
Pashure: CNC Punching Service
Zvadaro: Basa reGungano